Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Ice Cube Man Vs Machine: Okokuqala Entsha NFT Drop
Namhlanje, umdlali weqonga, imogul yolonwabo kunye nomseki we-BIG3 we-Ice Cube ubhengeze ukuba i-NFT yakhe yokuqala eyehlayo, uMshini we-Man VS uvale ngalo lonke uhlelo oluthengisiweyo ngaphantsi kweeyure ezingama-24.
Ukwehla, intsebenziswano negcisa elidumileyo uTrevor Jones kunye neNFT Marketplace Nifty Gateway, yenye yezona zinto ziphumeleleyo kwimbali yeqonga, ingenise ngaphezulu kwe-1.6 yezigidi zeedola. Bekukho umdla omkhulu kuzo zonke iintlelo, namangeno afikelela kwinqanaba elimangalisayo.
• I-NFT's yoHlelo lweGolide eli-12 (i-$15,000 nganye) ingenise ngaphezu kwama-400 ngohlelo ngalunye.
• I-NFT's 40 Silver Edition's ($5,000 inye) ingenise ngaphezu kwe-1000 ngohlelo ngalunye.
• I-NFT's yoHlelo lweBronzi ye-100 (i-$2,000 nganye) ingenise ngaphezu kwama-2000 ngohlelo ngalunye.
• Ii-Open Editions, ezifumaneka kuphela kubanini bomsebenzi wobugcisa wangaphambili kaTrevor, zithengiswe ngaphezulu kwe-12,000 leentlelo.
Oku kuhla kwe-NFT yinxalenye yomzamo omkhulu we-Ice Cube wokuqhubeka nokubakho kuyo yonke imiba kunye namashishini afanelekileyo ngokwenkcubeko namhlanje. Ukusuka ekukhuthazeni ukumelwa kwishishini lefilimu, ukukhulisa i-BIG3 ye-basketball league, kunye nokuba ngumthathi-nxaxheba osebenzayo kwi-metaverse, i-Ice Cube iyaqhubeka ukuba yinkokeli kuwo wonke amashishini.
I-NFT's evela kuMntu vs Machine iya kuqhubeka nokuhlala kwiqonga le-Nifty Gateway kwaye abanini ngabanye banokudityaniswa ukuze bathengiswe kwakhona. Iintlelo kwimarike yesibini sele ixatyisiwe ngokuphindwe kane okanye kahlanu kwaye ithengise i-1 yezigidi zeerandi ezongezelelweyo.